Sony Vegas Pro 16 Crack [अपडेट गरियो भित्र भाद्र 2021] - नि: शुल्क डाउनलोड
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Sony Vegas Pro 16 Crack
द्वारा Eva Williams, Naveen Pokhrel 2021-05-01, Nepali Blog
यदि तपाइँ Sony Vegas Pro 16 crack डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ तर श un्का बिना कि यो इजाजतपत्र सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुरक्षित छ कि छैन भन्ने बारे शंका गर्नुहुन्छ भने इजाजतपत्र संस्करणका फाइदाहरू र यसको असीमित उपकरणहरूको सेट्सको बारेमा थप जान्न मेरो समीक्षा पढ्नुहोस्।
नि: शुल्क Sony Vegas Pro 16
Vegas Pro छ विन्डोज को लागी भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर पेशेवर र एमेच्योरहरूको लागि। यो बहु-ट्र्याक अडियो फाईलहरू सिर्जना गर्नका लागि उत्तम हो, साथमा भिडियो र अडियो स्ट्रिमहरू सम्पादनको लागि।
गैर-रैखिक भिडियो र अडियो सम्पादनको लागि डिजिटल मल्टिटरैक प्रणाली हुनाले, भेगासले असीमित भिडियो र अडियो ट्र्याकहरूको साथ काम गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू मध्ये प्रत्येक A / B ट्र्याकको आफ्नै जोडीको साथ आउँदछ।
यदि तपाईं अझै सोनी भेगास प्रो १ full पूर्ण क्र्याकको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, ध्यान दिनुहोस् कि पूर्ण संस्करणमा उन्नत संगीत रचना उपकरणहरू छन् र पूर्ण-डुप्लेक्स मोडमा बहु-च्यानल इनपुट-आउटपुट समर्थन गर्दछ।
Vegas Pro 16 विशेषताहरु:
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस अनुकूलित गर्न को लागी सजिलो छ
तपाईलाई आवश्यक पर्ने कुनै उपकरणहरू छनौट गरेर बाँकीलाई हटाएर तपाईको स्वादमा उपकरणपट्टी परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्त उपयोगी छ जब तपाईं अरू भन्दा धेरै खास उपकरणहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दछ।
उपकरणपट्टी अनुकूलनले वर्धित कार्यप्रवाहको लागि अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, एक प्रयोगकर्ताले निर्णय गर्न सक्दछ कि कति रेन्डरिंग थ्रेडहरू तिनीहरूसँग काम गर्न आवश्यक छ। जबकि शुरुआतीहरूलाई सायद त्यस्ता सुविधाहरूको आवश्यक पर्दैन, तिनीहरू शीर्ष-पायदान पेशेवरहरूको लागि धेरै उपयोगी छन्।
थ्रीडी स्रोत अल्फा उपकरण
अभिभावक र बच्चा ट्र्याकहरूको बाहिर कम्पोजि group्ग समूह सिर्जना गर्न र यसलाई 3D स्थानमा सार्न, तपाईं थ्रीडी स्रोत अल्फा सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई विशेष प्रभावहरूको विस्तृत विविधता प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, साथै प्रकाश र ब्याकलाइटि improve सुधार गर्दछ।
थ्रीडी स्रोत अल्फा उपकरण प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो ट्र्याकमा पाठ थप्न सक्नुहुनेछ र थ्रीडी अन्तरिक्षमा यसलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ।
उन्नत निर्यात विकल्पहरू
Vegas Pro 16 crack क्र्याकको सट्टा लाइसेन्स प्राप्त संस्करण छान्नुभयो भने, नोट गर्नुहोस् कि इन-बिल्ट कोडेक्सलाई धन्यवाद, तपाईं सजिलैसँग आफ्नो फाइललाई लोकप्रिय ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अन्य समान सफ्टवेयर उत्पादनहरूको विपरीत, भेगास प्रो एक सोच विचार मेनू जसले फाइलहरूलाई अधिक चाँडै रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। यो एडोब प्रीमियरको मेनु भन्दा धेरै उत्तम छ यसको धेरै सुविधाहरू जुन तपाईंलाई प्राय: प्रयोग गर्नु हुँदैन।
एक रियल-टाइम मोडमा अडियो फाईलहरू प्रक्रिया गर्न, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको अडियो ट्र्याकको खाली ठाउँमा चार-ब्यान्ड प्यारामेट्रिक इक्विलाइजर र कम्प्रेसर सेट गर्नुहोस्।
अधिक के हो भने, यदि तपाईंले Sony Vegas Pro 16 crack डाउनलोड गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईं लाइसेन्स पाएको प्रतिलिपिमा डाइरेक्ट एक्स प्रारूप प्लगइनहरूमा to२ वटा पठाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ट्र्याकमा सँगै बिभिन्न डाटा ढाँचा थप्न यो सम्भव छ, तिनीहरूलाई रूपान्तरण वा पहिले रेन्डर नगरी।
अपरेसन प्रणाली विन्डोज: माईक्रोसफ्ट विन्डोज from बाट (केवल-64-बिट)
Processor 6th औं जेनेरेसन इंटेल कोर आई ((वा एएमडी बराबर) वा अझ राम्रो। २. Gh घज्ड र C कोर न्यूनतम। K के लिए, 7th औं जेनेरेशन इंटेल कोर आई ((वा एएमडी बराबर) वा अझ राम्रो। Gh.० गीगा र C कोर न्यूनतम
Storage १. GB जीबी हार्ड डिस्क डिस्क प्रोग्राम स्थापनाको लागि; ठोस राज्य डिस्क (एसएसडी) वा K के मीडिया को लागी उच्च गति मल्टि डिस्क RAID
र्याम GB जीबी र्याम न्यूनतम (१ GB जीबी सिफारिश; GB२ जीबी K के लिए सिफारिश गरीन्छ)
विन्डोज Sony Vegas Pro 16
Filename: win_sony_vegas_pro_16.exe (डाउनलोड गर्नुहोस्)
म्याक Sony Vegas Pro 16
Filename: mac_sony_vegas_pro_16.exe (डाउनलोड गर्नुहोस्)
Filename: १_सोनी_वेगास_प्रो__1_१ols.tools.exe (डाउनलोड गर्नुहोस्)
Filename: २_सोनी_वेगास_प्रो__1_१ols.tools.exe (डाउनलोड गर्नुहोस्)
नि: शुल्क भिडियो सम्पादन सफ्टवेयर
Filename: free_video_editing_software_tools.exe (डाउनलोड गर्नुहोस्)